RSSD Releases the Guidelines for building Seed Warehouse
မျိုးစေ့သိုလှောင်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် RSSDမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သော ညွှန်ကြားချက်များ
A great seed system hovers around not just how MUCH seeds you PRODUCE, but also how you store the seeds until it is needed in the next growing season. Our studies have shown that the poor seed growers have to sell the seeds as grain atalower price as the demand for the seeds grows atalater time (after 6-7 months from harvesting the monsoon crop). The farmers who have access to storage warehouse can store the seeds and sell at the right price as the demands go up.
သင့်အနေဖြင့် မျိုးစေ့မည်မျှထုတ်လုပ်နိုင်သည်သာမက နောက်စိုက်ပျိုးရာသီအတွက် လိုအပ်သော မျိုးစေ့များအား မည်သို့ သိုလှောင်မည်ဆိုသည်မှာလည်း အရေးကြီးသည်။ မျိုးစေ့ဝယ်လိုအားသည် မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီး ၆-၇ လကြာမှသာ မြင့်တက်လာသောကြောင့် သနားစရာကောင်းသော မျိုးစိုက်တောင်သူများသည် သူတို့၏ စပါးများကို အနိမ့်ဆုံးဈေးဖြင့်သာ ရောင်းချနေကြရသည်ကို လေ့လာချက်များအရ သိရှိရသည်။ သိုလှောင်ရုံရှိသော တောင်သူများသည် မျိုးစေ့များသိုလှောင်နိုင်ပြီးလျှင် ဝယ်လိုအားတက်လာသောအချိန်တွင် ဈေးမှန် ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချနိုင်ကြသည်။
With this information in mind, RSSD is providingagrant to seed growing farmers to build seed warehouses to store the seeds they have produced. The team is also involved in training the Seed Growers to build good quality warehouses that follow the basic scientific requirements of safe seed storage.
ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် RSSDသည် မျိုးစိုက်တောင်သူများ မိမိတို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သော မျိုးစေ့များ သိုလှောင်နိုင်သည့် သိုလှောင်ရုံ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ RSSD အဖွဲ့သည် လုံခြုံပြီး အရည်အသွေးပြည့်မှီသော မျိုးစေ့သိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အခြေခံ သိပ္ပံနည်းကျ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာနိုင်ရန် မျိုးစိုက်တောင်သူများကို သင်တန်းများလည်း ပေးလျက်ရှိသည်။
To aid farmers and Implementation teams (NGO, DOA etc), we have releasedasmall guidelines that the seed growers can follow to buildalow cost but scientifically sound warehouse.
မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများ (လယ်သမားများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့များ (အန်ဂျီအို၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန) အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အကုန်အကျနည်းသော သိပ္ပံနည်းကျ သိုလှောင်ရုံတည်ဆောက် နိုင်မည့် လမ်းညွှန်အသေးစားလေးအား ထုတ်ပြန်လိုက်ရပါသည်။
Download the PDF guidelines. Click on Image
RSSD team assisting Seed Growers for investment fund on Warehouses
RSSD Team Training seed growers on Warehouse building
Seed Grower Daw Khin Htay Win from Labutta building her seed warehouse
U Mg Kyi from Labutta building his seed warehouse